Eyona Indibano yePCB / Abavelisi beBhodi yeSekethe eprintiweyo | Itekhnoloji egqwesileyo
Eyona PCB umenzi FPC, Rigid-flex, MCPCB, Ceramic PCB, kunye PCB ibandla.
I-Pcb eNcinci ngakumbi
I-Pcb yobhedu olunzima
Phezulu Tg PC
I-Pcb yamanqanaba amaninzi
Single / kabini Layer Pcb
I-Flex Pcb ( Fpc )
Ibhodi yeSekethe eguquguqukayo
Intambo eFlethi eFlekibilikayo (ffc)
Ngomngxuma Pcb Assembly
INdibano ye-Bga PCb
INdibano yokuHamba ngentambo kunye nocingo
Ikhokele iNdibano yePcb
INdibano yoTshintsho lweMechanical kunye neMembrane
Abavelisi bebhodi yesekethe eprintiweyo ye-mcpcb, i-ceramic pcb, i-pcb yobhedu enzima, i-fr4 pcb, i-pcb enqabileyo eyongezelelweyo, i-flexible pcb kunye ne-flex flex pcb.
IiMveliso zeBhodi yeSekethe yeTekhnoloji eBalaseleyo kunye neNdibano yePCB
Itekhnoloji egqwesileyoabavelisi bebhodi yesekethe eprintiweyo bangabanikezeli besisombululo esisodwa seeyona ndibano PCB inkonzo kwibhodi yesekethe eguquguqukayo eprintiweyo, i-metal core PCB, i-ceramic PCB, i-fr4 PCB, njl. Wamkelekile umbuzo!
Ngaba uyazi ukuba yintoni iPCB etching?
I-Etching bubuchule bokususa imathiriyeli kusetyenziswa ukusabela kwekhemikhali okanye ifuthe lomzimba.Iindlela zokurhabula zinokwahlulwa ngokweendidi zokurhabula ezimanzi kunye nezomileyo.
Itekhnoloji yoMphezulu onyuswe phezulu
I-SMT yiteknoloji yendibano yomphezulu (iteknoloji yokunyuswa komphezulu) (isishunqulelo se-Surface Mounted Technology), eyona teknoloji idumileyo kunye nenkqubo kwishishini lokuhlanganisa i-electronic circuit. okanye iteknoloji yokunyuswa komphezulu.Lubuchwephesha bonxibelelwano lwesekethe ukuba i-instno pin okanye icandelo elifutshane lendibano yomphezulu (SMC / SMD, icandelo letshiphu yamaTshayina) kumphezulu webhodi yesekethe eprintiweyo (iBhodi yeSekethe eShicileleyo, iPCB) okanye umphezulu wenye substrate. , kwaye idityaniswe nge-welding ephindaphindiweyo okanye i-immersion welding.
I-8-Layer 4OZ ipleyiti yobhedu enzima
Yintoni ipleyiti yobhedu eshinyeneyo yePCB? Ipleyiti yobhedu eshinyeneyo iboniswa kwinkqubo yokulinda, ngomda othile wobugcisa kunye nobunzima bokusebenza, kwaye iindleko nazo ziyabiza kakhulu. Uluhlu lwe-foil yobhedu ludibaniswe kwinqanaba langaphandle le-FR-4. Xa ubungqingqwa bobhedu 2oz lugqityiwe, luchazwa njengeplate yobhedu eshinyeneyo yePCB.PCB ipleyiti yobhedu eshinyeneyo inomsebenzi wolwandiso olungileyo kakhulu, ongathintelwanga ngubushushu bokulungisa, indawo yokubhaka ephezulu ingasetyenziswa xa kuvuthuza ioksijini, ubushushu obuphantsi bungatshintshanga. I-brittle kunye nezinye iindlela zokubhaka ezishushu, kunye nokuthintela umlilo, ukusasazeka kwizinto ezingenakutsha, i-PCB yobhedu eshinyeneyo yahlukile, iimeko ezithile zesicelo nazo zahluke kakhulu.
Umaleko omine we-2 OZ ye-PCB yobhedu enzima ivela kweyona teknoloji ibalaseleyo eTshayina
Kwi-PCB proofing, umaleko wobhedu ubotshwe kwi-fr-4 surface. Xa ukutyeba kobhedu ≥ 2OZ kuqhutywa, kuchazwa njengepleyiti yobhedu engqindilili. Ubukhulu bayo buhlukile, eyona ndawo inokusetyenziswa nayo yahluke kakhulu.
Ibhodi ye-PCB ene-10 iphuma kweyona teknoloji ibalaseleyo eTshayina
Ibhodi yesekethe ye-Multi-layer ichazwa ngokubanzi njenge-10-layer —— i-20-layer okanye ngaphezulu, enzima ngakumbi kunenkqubo yebhodi yesekethe ye-multi-layer yesiqhelo, umgangatho wayo kunye neemfuno zokuthembeka ziphezulu, zisetyenziswa ikakhulu kwizixhobo zonxibelelwano, eziphezulu. -iiseva zokuphela, i-elektroniki zonyango, inqwelomoya, ulawulo lwamashishini, umkhosi kunye namanye amacandelo.
Ifilimu yeCeramic enecala elinye elityebileyo kwiPCB
Ibhodi yesekethe yefilimu eshinyeneyo, ekwabizwa ngokuba yibhodi yesekethe ye-hybrid, yenziwa ngokuprintwa kwesikrini kwi-substrate yezinto ezahlukeneyo. I-substrate ubukhulu becala yi-96% yemathiriyeli ye-alumina ceramic.
Umvelisi oqeqeshiweyo e-China ngokwenza ifilimu eshinyeneyo ye-ceramic.Ifilimu eshinyeneyo yePCB, iCeramic PCB
Ifilimu yeCeramic enamacala amabini atyebileyo
Umvelisi oqeqeshiweyo e-China ngokwenza ifilimu eshinyeneyo ye-ceramic.
Oyena Mvelisi wePcb oneeNkonzo zeNdibano
Ioyena umenzi wePCB igxile kwisisombululo esisodwa kwibhodi yesekethe eprintiweyo yesiko kunyeIndibano yePCB.
Ukususela ekuqaleni, njengomvelisi webhodi yesekethe eprintiweyo kunye neyona nto ingconoIndibano yePCB inkonzo e-Asia, iThekhnoloji eNgcono inikezelwe ekubeni liqabane lakho elingcono langaphambili, iibhodi zesekethe ezichanekileyo ezichanekileyo, ezinjengeebhodi zobhedu ezinzima, i-PCB e-ultra-thin, i-mixed layers, i-TG ephezulu, i-HDI, i-high frequency (i-Rogers, i-Taconic) , ibhodi elawulwa yi-impedance, i-Metal Core PCB (MCPCB) efana ne-Aluminium PCB, i-Copper PCB, kunye ne-Ceramic PCB (i-conductor Copper, i-AgPd, i-Au, njl) njalo njalo.
Yethuabavelisi bebhodi yesekethe eprintiweyo ungaboneleli ngePCB kuphela& Imveliso ye-MCPCB, kodwa iquka ukuphinda-phinda iPCB, ubuNjineli& uyilo lwenkqubo, ulawulo lwamacandelo& isisombululo sokukhangela, i-PCB yendibano yendlu& ukuhlanganiswa kwenkqubo epheleleyo, kunye nobuchwepheshe obunyuswe phezulu (SMT), indibano yeemveliso ezipheleleyo& uvavanyo.
Itekhnoloji egqwesileyoabavelisi bebhodi yesekethe eprintiweyo abaneminyaka engaphezu kwe-15 yamava, basoloko bephendula kwiiyure ezili-12, ngenkonzo yendibano ye-PCB engcono ngexabiso elihle.
Umgangatho wePCB ngundoqo weemveliso. Zonke iinjineli& Abafana besebe elibalulekileyo baneminyaka engaphezu kwemihlanu yamava kwishishini le-PCB, silandela umgangatho we-PCB ongagqibekanga, kunye nesicelo esikhethekileyo sabathengi.
Ubuchwephesha bobuGcisa belizwe
Uninzi lweenjineli zethu kunye nabaqhubi baneminyaka engaphezu kweshumi yamava kwishishini le-PCB, ngoko ke sinokuvelisa ezikhethekileyo ezifana nebhodi yobhedu enzima ye-20 OZ, i-4 layer ye-MCPCB, njl.
Sathenga oomatshini abaninzi abakumgangatho ophezulu, bezobugcisa belizwe& izixhobo PCB yokuvelisa, kunye nokukhangela, ukuphucula umgangatho iibhodi zethu.
Siyaqhubeka nokuphucula i-MCPCB yethu, i-FR4 PCB& FPC& Amanqanaba emveliso yeCeramic PCB ukufumana iziphumo ezanelisayo kubathengi kunye nathi.
Malunga Best Technology eprintiweyo abavelisi ibhodi yesekethe
ISiqinisekiso soMgangatho weBhodi yeSekethe eShicileleyo
Best Technology isiko pcb umenzi, esekwe ngoJuni 28, 2006, yinkampani Hong Kong ebhalisiweyo egxile kwi isisombululo-stop umnikezeli FPC, Rigid-flex PCB, MCPCB, FR4 PCB, Ceramic PCB, PCB Special ezifana Heavy Copper ( ukuya ku-20 OZ), PCB ebhityileyo eyongezelelweyo (0.10, 0.15mm), kunye nenkonzo yendibano yePCB.
Ukusukela ekuqaleni kwayo, njengomthengisi webhodi yesekethe eprintiweyo (PCB) eAsia, iTekhnoloji eNgcono inikezelwe ekubeni liqabane lakho lomenzi wePCB eliphambili, iibhodi zesekethe ezichaneke kakhulu, ezinjengeebhodi zobhedu ezinzima, iPCB ecwecwe kakhulu, exutyiweyo. iileyile, i-TG ephezulu, i-HDI, i-frequency ephezulu (i-Rogers, i-Taconic), ibhodi elawulwa yi-impedance, i-Metal Core PCB (MCPCB) njenge-Aluminium PCB, i-PCB yobhedu, kunye ne-Ceramic PCB (i-conductor Copper, i-AgPd, i-Au, njl.
Asiboneleli ngePCB kuphela& Imveliso ye-MCPCB kodwa iquka ukuphinda-phinda iPCB, ubuNjineli& uyilo lwenkqubo, ulawulo lwamacandelo& isisombululo sokukhangela, i-PCB yendibano yendlu& ukuhlanganiswa kwenkqubo epheleleyo, iteknoloji ephakamileyo (SMT), kunye nendibano epheleleyo yeemveliso& uvavanyo.
Ityala leBhodi yeSekethe elishicilelwe ngokweSiko
NgoJulayi 11, sasinomthengi omangalisayo ovela eJamani wasityelela
Ngomhla we-11 kaJulayi, sasinomthengi omangalisayo ovela eJamani wasityelela ngale ntsasa, ngokwenene uPeter, umphathi wethu jikelele kunye noTiffany, umthengisi wethu osanda kutyelela inkampani yakhe kwinyanga enye edlulileyo eFrankfurt. Ngeli xesha uMthengi undwendwele iofisi yethu, iFPC, umzi-mveliso we-SMT kwaye watya isidlo sasemini esimnandi kunye nathi. Ngaphaya koko, usinike iiprojekthi ezininzi kuquka neCeramic PCB.Enkosi ngenkxaso yakhe enkulu kwaye siya kuzinikela ekuboneleleni abathengi bethu ngeemveliso kunye neenkonzo ezanelisayo ngakumbi nangakumbi.
Besinomthengi omnye ovela e-US osityelele nge-25 kaJulayi, 2019
Besinomthengi omnye osuka e-US osindwendwele nge-25 kaJulayi, 2019. Uye wandwendwela umzi-mveliso wethu we-SMT kunye ne-FPC kwaye wavuya ukubona abasebenzi bethu abanamava kwiworkshop ecacileyo, iimveliso zokuhanjiswa ngokukhawuleza kunye nokuqinisekiswa komgangatho.
Isiko elivela eOstreliya lathethathethana ngeprojekthi yakhe neTekhnoloji eNgcono
Omnye wabathengi bethu abamangalisayo, undwendwele inkampani yethu nge-3 ka-Epreli 2019.Umthengi uthe iTekhnoloji eBalaseleyo yaxatyiswa njengomthengisi oxatyisiweyo weemveliso ezikumgangatho ogqwesileyo ezihlangabezana neemfuno zabo kanye.Waya phezu iimfuno PCB eziya kufuneka iimfuno zabo imveliso yangoku kwaye wasinika uqikelelo imveliso efunekayo kwezi projekthi.
QHAGAMSHELANA NOMVELISI WEPCB OWONAYO